पति रोहन प्रितले नेहा मेरो टाउको दुख्यो भनेपछि यस्तो जवाफ दिइन् नेहाले, जवाफ सुनेर रोहनको रोकिएन् हासो ! – SUDUR MEDIA
भारतमा सबैको मनमा बस्न सफल गायिका नेहा कक्कड र उनका श्रीमान् रोहनप्रीत सिंह आफ्नो फ्यानहरुको लागि धेरै पोष्ट गरिरहन्छन् । पोष्ट गरेका कतिपय भिडियोमा मज्जाक गरिएको हुन्छ । यसपटक दुई जनाको एउटा फन्नि भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बनेको छ । यो भिडियोमा रोहनप्रितको टाउको दुखेको हुन्छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः एक अर्काको प्रेममा पा’गल थिए माधुरी दीक्षित र सञ्जय दत्त तर सञ्जयको यस्तो क’तुर्त बाहिरिएपछि एकाएक टाढा भएकी थिइन् माधुरी ! बलिउड फिल्म नगरीका लागि ९० को दशक निकै फलदायी मानिन्छ। जुन दशकमा माधुरी दिक्षित र सञ्जय दत्तको जोडी निकै चर्चित थियो । यो जोडीले निकै हिट फिल्म गरे जसबाट उनीहरु प्रेमको सुरुवात भएको थियो ।
तर उनीहरु चाहेर पनि जाडिन् सकेनन् । थानेदार, साजन तथा खलनायक गरी उनीहरुको लगातार तीन फिल्म हिट भएका थिए । उनीहरुको केमिस्ट्री देखेर मानिसहरु पागल हुन्थे । फिल्ममा काम गर्दागर्दै माधुरी र सञ्जय वास्तविक जीवनमा एक–अर्कालाई प्रेम गर्न थालेका थिए। तर, सञ्जय पहिले नै विवाहित थिए र उनको एक छोरा पनि थिए ।
लामो समयसम्म चलेको उनीहरुको प्रेमले मुर्त रुप लिन सकेन् । सन् १९९३ मा भएको मुम्बई घटनापछि नयाँ मोड लियो । यस मामलामा सञ्जय दो षी देखिएपछि माधुरी सञ्जयबाट टाढा भइन् । अहिले सज्जय पत्नी मान्यता सँग खुशी साथ जीबन बिताइरहेका छन् । भने माधुरी पनि आफ्नौ बैबाहि जीबनमा निकै खुशी छन् ।